Hanti-dhawraha Guud oo Beeniyay inay dacwad ku soo Oogayeen Shirkad Ganacsi | Somaliland.Org
Hanti-dhawraha Guud oo Beeniyay inay dacwad ku soo Oogayeen Shirkad Ganacsi
November 19, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- Hantidhawrka guud ee qaranka Somaliland Maxamuud Aw Cabdi Ibraahim ayaa been aan sal iyo raad toona lahayn ku tilmaamay war ay qoreen qaar ka mida jaraa’idka dalku.
Hantidhawraha Guud Maxamuud oo shalay la hadlay saaxafadda ayaa wax auu sheegay in aanay jrin wax dacwad ah oo ay ka gudbiyeen sharaa’iga dalka kuwo ka mid ah hawsha hantidhawrkana aanay ahayn inay baadhaan shirkada madaxa banaan.
Hantidhawruhu waxa uu intaasi ku daray in baahinta warkan been abuurka ah ay ka danbeeyaan xubno ay dabagal uu ku hayo hantidhawrka guud, kuwaasi oo uu xusay inay soo gudbin doonaan marka la dhamaystiro baadhista ay ku dabo-jiraan.
“Waxba kama jiraan war sheegayay inaanu dacwad ku soo oogayno shirkadda MSG oo ka mid ah shirkadaha Ganacsi ee dalka, waxaana arrintaasi wada oo faafiyay dad aanu baadhistooda gacanta ku hayno,”ayuu yidhi Hanti-dhawraha Guud.
Hantidhawraha Guud oo hadalkiisa sii watay waxa uu yidhi “Hantidhawrku hawshan uu qabtaa waa baadhis, baadhistu waxay leeyahay anshax wax qoran oo nidaam la raaco leh. Annagu hantidda dawladda ayaanu ilaalinaa ee ma ilaalino Hantida shirkadaha.”
Previous PostMadaxweyne Obama oo keli keli ula kulmay madaxweynaha iyo mucaaridka dalka BurmaNext PostKomishanka oo caddeeyay inay doorashadda Deegaanku ka dhacayso Degmadda Xudun	Blog